Zvigadzirwa zveMakambani Vatengesi uye Fekitori - China Zvigadzirwa Zvikwata Vagadziri
Hombodo, Tube, Mafuta, Mabhegi, Majekiseni, Zvizoro, Kondomu, Ampuleti, Cartoning Machine
Hombodo, Tube, Mafuta, Mabhegi, Majekiseni, Zvizoro, Kondomu, Ampuleti, Plow-Yakaputirwa Zvigadzirwa Horizontal Cartoning MachineMain performance uye masisitimu maitiro: 1. Inotora otomatiki kudyisa, kuburitsa, kufudza, kuvhara uye kubuda. Uye mamwe mafomu ekupakata, chimiro chakakwenenzverwa uye zvine musoro, uye mashandiro uye kugadzirisa kuri nyore; 2. Servo / inotsika mota, inobata skrini uye PLC inogadziridzwa sisitimu yekugadzirisa inogamuchirwa kuti iratidze mashandiro emurume-muchina mu ...
Ndiro, Tube, Mafuta, Mabhegi, Tube jekiseni, Cosmetis, Kondomu, Ampoules, gejo-rakaputirwa Zvigadzirwa Horizontal Cartoning Machine
Hombodo, Tube, Mafuta, Mabhegi, Tube jekiseni, Cosmetis, Kondomu, Ampoules, Plow-Yakaputirwa Zvigadzirwa Horizontal Cartoning Machine (Zvese zvigadzirwa zvinogona kuvezwa) Main performance uye mamiriro ehurongwa: 1. Inotora otomatiki kudyisa, kuburitsa, kufudza, kuisa chisimbiso uye goho. Uye mamwe mafomu ekupakata, chimiro chakakwenenzverwa uye zvine musoro, uye mashandiro uye kugadzirisa kuri nyore; 2.Servo / yekutsika mota, yekubata skrini uye PLC inogadziriswa yekudzora sisitimu inogamuchirwa kune m ...
Tyz-130 otomatiki Condom Cartoning Machine
Otomatiki Piritsi Bhodhoro Cartoning MachineMain mashandiro uye chimiro chimiro. Uye mamwe mafomu ekupakata, chimiro chakakwenenzverwa uye zvine musoro, uye mashandiro uye kugadzirisa kuri nyore; 2.Servo / yekutsika mota, yekubata skrini uye PLC inogadziridzwa sisitimu yekugadzirisa inogamuchirwa kuti iratidze mashandiro emurume-muchina interface yakajeka uye iri nyore, ine yakakwira degree of automation uye yakawanda huma ...
Otomatiki Carton kurongedza muchina wemvura unopisika
TYZ-130 otomatiki Cartoning muchina Customzied cartoning muchina wakakodzera kune ese marudzi echigadzirwa Chinhu chikuru mashandiro uye chimiro chimiro: 1. Inotora otomatiki kudyisa, kusunungura, kufudza, kuvhara uye kuburitsa. Uye mamwe mafomu ekupakata, chimiro chakakwenenzverwa uye zvine musoro, uye mashandiro uye kugadzirisa kuri nyore; 2.Servo / yekutsika mota, yekubata skrini uye PLC inogadziriswa yekugadzirisa system inogamuchirwa kuti iratidze mashandiro emurume-muchina interface yakajeka uye ...
Horizontal Cartoning Machine ye Hardware Kupa
Horizontal Cartoning Machine Ye Hardware KuberekaMain mashandiro uye chimiro chimiro: 1. Inotora otomatiki kudyisa, kusunungura, kufudza, kuvhara uye kuburitsa. Uye mamwe mafomu ekupakata, chimiro chakakwenenzverwa uye zvine musoro, uye mashandiro uye kugadzirisa kuri nyore; 2.Servo / yekutsika mota, yekubata skrini uye PLC inogadziriswa yekugadzirisa system inogamuchirwa kuti iratidze mashandiro emurume-muchina interface yakajeka uye iri nyore, ine yakakwira degree of automation uye ...
Tyz-130 otomatiki Chikafu / Hardware / Mishonga / Zvinodhaka / Mushonga / Bhodhoro / Tube Bhokisi Kurongedza Cartoning Machine
Tyz-130 otomatiki Chikafu / Hardware / Chemishonga / Chizoro / Mushonga / Bhodhoro / Tube Bhokisi Kurongedza Cartoning Machine Main performance uye mamiriro ehurongwa: 1. Inotora otomatiki kudyisa, kurongedza, kupa chikafu, kuvhara uye kuburitsa. Uye mamwe mafomu ekupakata, chimiro chakakwenenzverwa uye zvine musoro, uye mashandiro uye kugadzirisa kuri nyore; 2.Servo / yekutsika mota, yekubata skrini uye PLC inogadziriswa yekugadzirisa system inogamuchirwa kuti iratidze mashandiro emurume-muchina interface cl ...
Otomatiki Cartoning Machine yeSoft Tubes
Otomatiki Cartoning Machine yeSoft Tubes Customzied cartoning muchina inokodzera mhando dzese dzechigadzirwaMain mashandiro uye chimiro chimiro: 1. Inotora otomatiki kudyisa, kusunungura, kufudza, kuvhara uye kuburitsa. Uye mamwe mafomu ekupakata, chimiro chakakwenenzverwa uye zvine musoro, uye mashandiro uye kugadzirisa kuri nyore; 2. Servo / yekutsika mota, inobata skrini uye PLC inogadziridzwa sisitimu yekugadzirisa inogamuchirwa kuti iratidze mashandiro emurume-muchina interface cle ...
Tyz-130 otomatiki Bhokisi Kurongedza Mashini ine Hot Glue Kuisa chisimbiso
Tyz-130 otomatiki Chikafu / Hardware / Mishonga / Zvinodhaka / Mushonga / Bhodhoro / Tube Bhokisi Kurongedza Cartoning MachineMain performance uye masisitimu maitiro: 1. Inotora otomatiki kudyisa, kuburitsa, kufudza, kuvhara uye kuburitsa. Uye mamwe mafomu ekupakata, chimiro chakakwenenzverwa uye zvine musoro, uye mashandiro uye kugadzirisa kuri nyore; 2. Servo / inotsika mota, inobata skrini uye PLC inogadziriswa yekugadzirisa system inogamuchirwa kuti iratidze mashandiro emurume-muchina interface yakajeka ...
Tyz-130 otomatiki Condom Kuisa Machine Carton Machine
TYZ-130 otomatiki Makondomu tsiva muchina, kondomu katoni muchina, kondomu contoner Main mashandiro uye chimiro chimiro: 1. Inotora otomatiki kudya, kusunungura, kufudza, kuvhara uye kubuda. Uye mamwe mafomu ekupakata, chimiro chakakwenenzverwa uye zvine musoro, uye mashandiro uye kugadzirisa kuri nyore; 2.Servo / yekutsika mota, yekubata skrini uye PLC inogadziridzwa sisitimu yekutora inogamuchirwa kuti iratidze mashandiro emurume-muchina interface yakajeka uye iri nyore ...
Tyz-130 otomatiki Chikafu Chinwiwa Chemishonga Mishonga Bhokisi Kurongedza Carton Machine
TYZ-130 otomatiki Chikafu Chinwiwa Chemishonga Mishonga Bhokisi Kurongedza Carton Machine Yakagadziriswa katoni muchina inokodzera mhando dzese dzechigadzirwa. Uye mamwe mafomu ekupakata, chimiro chakakwenenzverwa uye zvine musoro, uye mashandiro uye kugadzirisa kuri nyore; 2.Servo / yekutsika mota, yekubata skrini uye PLC inogadziriswa yekudzora sisitimu inogamuchirwa kuita iyo ...
Otomatiki Anotapira maJellies Mune Blister Tray Bhokiseni Muchina
Otomatiki maJellies Mune Blister Tray Bhokisi reMuchina Rinonaka mune blister tray Jellies mune blister tray Zvimwe zvigadzirwa mu blister tray (Zvese zvigadzirwa zvinogona kugadziridzwa) Main performance uye chimiro chimiro: 1. Inoitisa otomatiki kudyisa, kuburitsa, kufudza, kuvhara uye kuburitsa. Uye mamwe mafomu ekupakata, chimiro chakakwenenzverwa uye zvine musoro, uye mashandiro uye kugadzirisa kuri nyore; 2.Servo / yekutsika mota, yekubata skrini uye PLC inogadziriswa yekudzora sisitimu inogamuchirwa kuita ...
123456 Inotevera> >> Peji 1/26